यस्तो रोग लागेको हुनसक्छ जसले बसेको बेला खुट्टा हल्लाउँछ ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
यस्तो रोग लागेको हुनसक्छ जसले बसेको बेला खुट्टा हल्लाउँछ ?
केही मानिस बस्दाखेरी खुट्टा हल्लाइरहेका हुन्छन् । धेरैजनाले यो बानी मात्र भएको ठानेर बेवास्ता गर्छन् । तर यो एकप्रकारको रोट– रेस्टलेस सिन्ड्रोमको लक्षण हो । के हो यो सिन्ड्रोम र यसबाट कसरी छुटकारा पाउने ? चर्चा गरौं ।